I-BMW Australia iyakuthintela ngokungqongqo ulwabiwo lweemodeli ezintsha zeX7 Dark Shadow Edition kwiimodeli zeXDrive30d kunye neM50i, kwaye iyakwaziswa apha ekhaya ngoMatshi 2021, ibe mihlanu kuphela kwimodeli nganye. Ivenkile yakwaBMW iququzelela ukubhukisha ngokufuna idiphozithi eyi- $ 5,000, emva koko ibeka iodolo kunye nolwazi ...
I-F15 X5 ithathe indawo ye-crystal gear lever ye-X7, ilapha namhlanje!
Kwindawo entsha yangaphakathi ye-BMW, ​​ukutshintsha kwekristale kunye namaqhina kunokuthiwa lelinye lawona malungu abaluleke kakhulu ukuphucula ubume bangaphakathi. Ngokwangoku zisetyenziswa kwiX5, X6, X7, 8 series nakwezinye iimodeli, kodwa iimodeli zangaphambili kufuneka zilungisiwe. Akunzima ...
Ngaba i-BMW 3 Series ye-crystal gear gear lever?
Oko kwasungulwa iimodeli ze-BMW kunye nekhowudi ye-G chassis, amaqhosha adityanisiwe kwindawo etshintshayo, isizisela izimvo ezininzi. Ukudityaniswa kwesiqalo esinye seqhosha, ukuqala-kokumisa ngokuzenzekelayo, imo yokuqhuba, kunye nebhuleki yesandla yombane inamandla ngakumbi kwi-techno ...
Xa ujongene nokutshintsha kweemarike zehlabathi kunye noqoqosho "olutsha oluqhelekileyo", iQuadrangle inendlela ende ekufanele ihambe.
I-Quadrangle iyaqhubeka nokukhawulezisa ukutsha kunye notshintsho lwamashishini, kwaye izimisele ukuba yinkampani eneshishini eliphambili, uphuhliso olwahlukeneyo, ukusebenza kwehlabathi, kunye nokudityaniswa kwemveliso kunye nentengiso. Xa ujongene nokutshintsha kwemakethi kunye ne-econ ...
Wamkelekile kwiwebhusayithi yeMankalei Brand New, iLebhu yeMankalei yaphuculwa ngokupheleleyo ngoJulayi, inikezela ngeemveliso ezintsha, iinkonzo ezingaphezulu, kwaye ijongene nehlabathi liphela. Unokulandela iiakhawunti zethu zosasazo lweendaba ukuze ufumane ulwazi kuthi, unokufumana ikhonkco leendaba ezentlalo e ...